BaaristaQuraanka.BlogSpot.com - Quraanka yaa qoray?: ilaaha maxamad waa ilaah noocee ah?
Posted by Maskaxda Xoree at 9:06 AM
Ciyaalka Xaafadda May 14, 2010 at 10:02 PM
"Maxamad quraankiisa wuxuu noogu sheegay in ilaahey uu wax walbo og yahay oo yahay ilaah naxariis badan oo cadaalad ah."
Allah waxa uu naxariis leeyahay inta qolyaha kaa danta leh ay dantooda kaa gaarayaan inta kalena waa dhiig, iyo dagaal iyo cabburin. Waxyaalaha wax magaratada loogu calaamadeeyo naxariista Allah waxaa kamida roobka da'a guga oo waxay roob u tukadaan xataa jiilaalka. Aqoontii tusi lahayd in roobku goor u qeexan leeyahay waa ag martay taasina waa ayaandarrada lagu dhaqo danyarta iyo wax magaratada.
Wadaad ayaa dhawaan igu yiri, "Allah cidna uma baahna ee asagaa ka weyn wax walba. Allah wuu cadaabayaa wixii ku caasiya..." Sidii uu u waday weeraha la wada yaqaan ee dadka lagu cabsi geliyo ayaa waxaan ku iri, "Allah waxaad ka dhigtay madman aad u dabeecad xun," anigoo aan u sheegin in tiraabtiisa oo dhan been ka koobannayd. Wejigiisa ayaa mar isbeddelay, waxa uu se sidii in aan ahayn doqon u beddelay huuhaadii hore oo uu ku doceeyey kolkaas wax uu ugu yeeray "naxariiska Allah" maaddaama cabsidii shaqayn weyday. Waa maskiin Wahaabbiyad lagu maan dulleeyey oo isu haysta in uu dunida oo dhan ka sarreeyo oo uu nasiib u yeeshay dhabta keliya oo jirta Soomaali badanna waa lamid.
Maskaxda Xoree May 15, 2010 at 1:15 PM
Maxamad wuxuu rabay power-ka ama jagada si uu u maamulo dadka oo ay aga dambeeyaan. Maxamad kama duwana nibankii bariga dhexe ka imaan jiray oo isku sheegi jiray in ay ahaayeen nabi oo dhihi jiray waxaan nahay wakiilada alle. Nibankaas waxey sidaas u suubin jireen waa in ay hellaan jago iyo in ay maamulaan dadka oo laga dambeeyo. Masaakiin aan caqligooda ka shaqeysiin ayey been ka dhaadhiciyeen.
Soomaaliyeey maskaxdiina xoreeya
Somaliwaaqism November 5, 2010 at 6:21 AM
sxb websidekaan link iigu samee websiyada geeska midig kuugu qoran ee free thinkerska ee islaamka diinta maxamed carab beenaale ka xuroobay iigu link garee, sidoo kale hal maqaal aad adiga qortey ayaan kaa deeynsadey kuna qorey websikeeyga cusub, mahadsanid
Anonymous October 20, 2011 at 6:36 AM
adigaan diiinta ka dhacey oo bilaa diin ah cid naarta kula gashaa rabtaa lkn heli meysid waxaas oo been ah iyo quaafad ahna sheydadanka baa kugu qasbaya diintani waa din dhameys tiran bal tan hindusmka iyo budhismka iyo christanka maad wax ka qortid oo aragtid waxa ku jira been.waxaana hubaal ah adigu steven jobs iyo micheal jokson baad taqaanye waana tageen adiguna maalinbaa tagi doontaa waxii aad sahey u qadan laheyd sameyso hadeer.
culusow November 4, 2012 at 7:41 PM
ninka la baxay maskaxda xoree waxaa iga su aal ah muxuu ka yaqaanaa diinta, ileyn quraankan ilaah wuxuu ku soo dajiyay afcarabi uu ilaah sheegay in aysan soo dajin shayaadhiin, taariikhdana waxay tuseydaa oo ilaah loogu mahdinaa in Nabi Maxamed csw uu ahaa nabi aan wax qori karin waxna aqrin karin oo shaqeysto ari raaco, dadkii markaas joogayna waxay u yaqaaneen Maxamed amiin, oo waxay ku aamini jireen intaan lagu soo dajin waxyiga wax walba oo wuxuu u sheego waligood mabeenin oo markey is qabsadaan ayuu dhax dhaxaadin jiray, oo wuxuu ahaa ninka loogu jecel yahay qabiilkiisa banii haashim intaan lagu soo dajin waxyiga, markii wax yiga lagu soo dajiyay na way raacdeeyeen, oo la dagaaleen kahore intey la dagaalin waxay ula yimideen inay ku daraayaan gabadha gabar ugu qurux badan, xoolo kan ugu xoola badana ka dhigaayaan, boqornimana ay u caleemo saaraayaan, intaas markey yiraah deen buu quraan ku aqriyay, kadibna waxaa ka kala cararay Gaaladii oo dhan oo ugu horeeyaan abuu jahal iyo abuu lahab, si kasto oo ruux uu uga hore yimaado quraankaan masoo heli doono wax is burin ah laakiin ruux bey si la noqon kartaa haddii uu doono inuu fahmona waa la fahan siin karaa sida ninka labaxay Maskaxda xoree yuu ka xoreynaa yuuna u xoreynaa? ma wuxuu ula jeedaa halaga tago diinta dhabta ah oo ha la aado diin la aan? ama wuxu ual jeedaa asaga waa nin maskax badan. makafakaray in ilaah lee yahay cilmigiisa haddii geedaha oo dhan qalin laga dhigo oo badaha oo dhana qad laga dhigo oo cilmiga alle lagu qori maago ay badaha dhamaanaayaan intaan cilmiga alle dhamaanin. waxaan ku soo gaba gabeynaa quraankaan waxaa ka daalay niman adiga kaa caqli badan oo kaa lacag badan oo kaa naceeb badan diinta is laamka ilaahna ku caajis galiyay inay soo saaraan hal aayad oo quraanka oo kale ah wax ba ha dhihin wuu iska hor imaanaa ee waxaad keentaa hal aayad oo quraanka ookale ah. mana keeni doonti ee naarka baq oo qoryaheeda yihiin dad iyo dhagxaan.